politika Fiarovana fiainan'olona - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > politika Fiarovana fiainan'olona
Misaotra anao tamin'ny fidirana ny tranokalan'ny YIC-Electronics.com Hajainay ny momba ny fiainanao manokana ary raisinay am-pitandremana tsara ny fiarovana ny Internet. Ho fiarovana tsara ny tsiambaratelonao dia omenay etsy ambany ny fanazavana ny fanazavanay momba ny fampahalalana an-tserasera sy ny safidy azonao atao momba ny fomba fanangonana sy fampiasanao ny fampahalalana anao.
Inona ny mombamomba manokana angonina ary ahoana no fampiasana azy io?
Manangona fampahalalana avy amin'ny mpampiasa tranonkala amin'ny fomba maro samihafa izahay, miaraka amin'ny tanjona dia hanome traikefa miantsena mahomby sy misy dikany ary ilaina manokana. Ohatra, afaka mampiasa ny mombamomba anao manokana izahay:
- Raketo ary haingana ny fampahafantarana nomenao teo aloha
- Manampy anao hahita haingana ny fampahalalana, ny vokatra ary ny serivisy
- Mamorona votoaty mifandraika aminao
- Mampitaha ny vaovao aminay, ny vokatra sy ny serivisinao
Fisoratana anarana sy fandefasana: Mba hampiasa faritra sasany amin'ity tranokala ity na entana, ny mpanjifa rehetra dia tsy maintsy mameno taratasy fisoratana anarana amin'ny Internet miaraka amin'ny mombamomba anao manokana, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho anao, ny anaranao, ny lahy sy ny vavy, ny fandefasana ary ny adiresy faktiora (es), an-telefaona. laharana, adiresy mailaka ary laharana carte de crédit. Ankoatr'izay, azontsika atao ny mangataka ny firenena onenanao sy / na firenena misy anao miasa, mba hahafahantsika manaraka ireo lalàna sy fitsipika mifandraika amin'izany. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina amin'ny fandoavana volavolan-dalàna, ny famoahana ny filaminana ary ny fivarotana anatiny ary koa ny hifandraisana aminao ny momba ny baikonao sy ny tranokalanay.
Email Addressesl: Toerana maro ao amin'ny tranokala mamela anao hiditra ny adiresy mailaka ho an'ny tanjona tafiditra fa tsy voafetra ho: misoratra anarana amin'ny fampandrenesana fampandrenesana maimaim-poana, mangataka fampandrenesana rehefa tonga ny marika vaovao na ny vokatra misy, na ny fisoratana anarana ho an'ny kaonty mailaka. Ankoatr'izay, ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana fampiroboroboana nomen'ny YIC-Electronics.com dia an-tsitrapo tanteraka ary mitaky ny fampahafantarana ny fifandraisana ilaina ilazana ireo mpandresy sy loka loka. Azontsika atao ny mandefa ny anarana sy ny tanànan'ny mpifaninana amin'ny fifaninana ao amin'ny tranokalanay.
Rakotra log: toa ny ankamaroan'ny tranokala dia manaiky ny URL Internet izay alehanao eto amin'ity tranokala ity ny mpizara tranokala. Azontsika atao ihany koa ny misoratra anarana ny adiresy Internet anao (IP), ny serivisy amin'ny Internet, ary ny daty / fotoana hanaovana ny fitantanana rafitra, fanamarinana ny filaminana, ny fivarotana anatiny sy ny famahana olana eo amin'ny rafitra. (Ny adiresy IP iray dia mety manondro ny toerana misy ny solosainao amin'ny Internet.)
Famerenana ny vokatra: Mangataka adiresy mailaka sy toerana misy azy izahay sy ny fandefasana ny fandinihana ny vokatra rehetra. Ny adiresy mailakao dia hotehirizina manokana fa ny toerana misy anao dia ho hitan'ny mpampiasa hafa. Ny fampahalalana hafa rehetra izay tianao hofidinao ho ampahany amin'ny famerenana dia ho azon'ny mpitsidika hafa mankany amin'ilay tranokala.
Ampiasainay amin'ireto fampiasana manaraka ireto ny fampahalalana momba ny tenanao:
Fifandraisana aminao: hampiasa ny mombamomba anao manokana izahay hifandraisana aminao momba ny Site sy ny baikonao. Ny mpanjifany rehetra dia tokony hanome adiresy mailaka ahafahanao mifampiresaka amin'ny YIC-Electronics.com momba ny baiko napetraka. Azonao atao ny mandefa mailaka fanamafisana rehefa avy misoratra anarana aminay ianao ary koa ireo fampandrenesana mifandray amin'ny serivisy ilaina (ohatra: fampiatoana ny serivisy mandritra ny fotoana fohy ho an'ny fikojakojana.) Azonao atao koa ny mametraka ny adiresy mailakao mba hangataka fampandrenesana rehefa mahazo marika vaovao izahay. fomba vokatra na vokatra, na hisoratra anarana amin'ny mailaka mailaka sy tolotra manokana. Azonao atao ny tsy misoratra anarana na miala amin'ny mailaka ho avy amin'ny fotoana rehetra (jereo ny fizarana Opt Out / correction etsy ambany raha mila fanazavana fanampiny).
Tsy mivarotra, manofa, manao varotra, fahazoan-dàlana izahay, na raha tsy manambara ny mombamomba anao na ara-bola amin'ny olona rehetra.
Manao ahoana ny fiarovana ny fampahalalana ahy manokana?
Ity tranonkala ity dia mampiditra fomba fiasa ara-batana, elektronika ary fitantanana mba hiarovana ny tsiambaratelo momba ny mombamomba anao manokana, toy ny:
- Miaro ny fifanakalozana ara-bola rehetra vita amin'ny tranokala ity miaraka amin'ny tranokala azo antoka ("SSL").
- Manome mpiasa fotsiny izay manome serivisy manokana aloa ny mombamomba anao manokana.
- Tsy miasa afa-tsy amin'ireo mpamatsy mpikirakira antoko-telo izay inoantsika fa mahazo antoka tsara ny oran'ny solosaina rehetra.
Raha ny asa aman-draharaha ataontsika dia natao amin'ny fiarovana ny fampahalalana momba anao manokana, tadidio fa 100% ny fiarovana dia tsy misy na aiza na aiza, an-tserasera na ivelany.
Cookies: Inona ary izy ireo ary ahoana no fampiasana azy ireo?
Ny cookie iray fanaraha-maso dia misy fampahalalana elektronika izay azon'ny tranokala na navigateur amin'ny tranokala sarotra apetraky ny solosaina mba hahafahana manao asa manokana toa ny fahatsiarovana ny filanao na ny votoaty miantsena. Ny Cookies dia mamela ny mpandraharaha tranonkala hanatsara kokoa ny fitsidihan'ny tranokala amin'izay tiany. Ny fampiasana cookies dia nanjary fenitra amin'ny Internet ary ny tranokala lehibe indrindra dia mampiasa azy ireo.
Ny YIC-Electronics.com dia mampiasa mofomamy mba hanampiana amin'ny fikajiana ireo vokatra ampidiranao ao amin'ny lisitry ny lisitrao sy ny sarety mba hahafahantsika manome traikefa mora kokoa amin'ny fiantsenana mora kokoa. Azafady, azafady fa tsy mampiasa mofomamy izahay ahafahana manara-baovao momba ny tranokala hafa izay mety tsidihanao na manangona fampahalalana fanampiny fanampiny.
Na dia manaiky cookies aza ny ankamaroan'ny mpanamory, dia afaka manova ny safidin'ny tranonkalanao ianao hanakana ny cookies na hampandre anao isaky ny andefasana cookie ianao.